यस्तो पो सरकारी अस्पताल ! स्वास्थ्यकर्मी हुनु त . . . – Halkhabar kura
१४ मंसिर २०७७, आईतवार १५:२९
विष्णु नेपाल/रासस – चिटचिट पसिनाले गञ्जी चिसो भयो । रिँगटा चल्न थाल्यो । मैले यतिविघ्न टाउको दुखेको जीवनमा कहिल्यै अनुभव गरेको थिइन । ज्वरोको तापक्रम १०० डिग्रीभन्दा माथि नै थियो ।
उठ्न कोशिस गरेँ । खुट्टा टेकिएनन् । छिप्पिँदो रातले बिहानीको प्रतीक्षा गर्दै थियो । कसलाई के भनौँ ? लाग्यो जीवन यति नै रहेछ कि ! श्वासप्रश्वासमा अप्ठ्यारो छँदै थियो । कोठा उज्यालो थियो । आशाका किरण धपक्क निभे । आँखा घुमे, जता हेर्‍यो, सर्वत्र अन्धकार । साहस हराउँदै थियो ।
उपचार सेवा त उत्कृष्ट छँदैछ । स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने व्यवहार, खानपान र सरसफाइ असाध्यै राम्रो रहेको कोरोनालाई जितेर घर फर्किएकाले राससलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । अस्पतालमा कोभिड–१९ को स्थानीय स्रोत व्यक्तिसमेत रहनुभएका वरिष्ठ शल्यचिकित्सक नेपालले विजयादशमी मनाउन पाउनुभएन । उहाँ कोरोना सङ्क्रमित हुुनुभयो । “आफू सङ्क्रमित हुँदा मलाई सङ्क्रमितका पीडासँग अझ नजिक पु¥यायो । घरमै आइसोलेशनमा बस्दा सामाजिक सञ्जाल र टेलिफोनमार्फत बिरामीलाई दिनरात नभनी चिकित्सकीय ज्ञान र औषधि भनिदिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तपाईलाई सल्लाह दिएको रात म पनि आइसोलेशनमै थिए । पोजेटिभ देखिएको दुई÷तीन दिन मात्र बितेको थियो । केही अप्ठ्यारो मलाई थियो । सहकर्मी चिकित्सकले अस्पतालमा बस्न आग्रह गरेका थिए । आफूभन्दा जटिल बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । आफ्नो श्यया बिरामीलाई छाडेर आइसोलेशन बस्न घर रोजेँ ।”
उहाँले कोरोना उपचार र अस्पतालको समग्र व्यवस्थापनमा तल्लीन हुँदाहुँदै सङ्क्रमणसित जुध्नुपर्‍यो । ठट्टा गरी हाँस्दै भन्नुभयो, “कोभिडमा काम गर्नेले कोभिड हुनुपर्दाेरहेछ । यसबाट समग्र व्यवस्थापनमा छिटो सुधार गर्न थप बल मिल्ने रहेछ ।”
Previous नेपालमा कार्यरत अमेरिकीलाई भिसा निःशुल्क गर्न अमेरिकी दबाब !
Next परपुरुष-परस्त्रीसँगको सम्वन्ध समस्या होईन समाधान होः निर्मला ढकाल (भिडियो)